के बोरिस जॉनसन (ओटोम्यान पुर्खाहरूले) युरोपमा अराजकता शुरू गर्न सक्छन् कि ओटोम्यान साम्राज्य खडा हुनेछ? : मार्टिन Vrijland
मैले सोचे कि यो मजाक हो जब एक पाठकले निम्न प्रतिक्रिया पोस्ट गरे: "उहाँ एक टर्क हुनुहुन्छ।" मेरो ठूलो अचम्मको कुरा, विकिपेडियाको एउटा अंशले अनुसरण गर्यो जसले वास्तवमा बोरिस जोन्सनलाई ओटोम्यान पुर्खाहरू थिए भनेर देखायो। कुनै ओटोम्यान पूर्वजहरू मात्र होइन; हामी राजनीतिक क्यारियरको साथ पूर्वजहरूको स्पष्ट रूपमा कुरा गर्न सक्छौं। जॉनसन उस्तै राजनीतिज्ञ अली कमाल जस्तै रक्त रेखाबाट आउँछन्। एउटा चाखलाग्दो खोजी, किनकि यसले मेरो पूर्वानुमानलाई छिट्टै पुनःप्राप्त ओटोम्यान साम्राज्यलाई समर्थन गर्दछ। मलाई यो अधिक वर्णन गर्न अनुमति दिनुहोस्।
ओटोम्यान साम्राज्य एक समय संसारको सबैभन्दा ठूलो थियो र सय वर्ष भन्दा कम पहिले यसको मृत्यु देख्यो। वर्षौंदेखि म साइटमा देखाउने कोशिस गर्दैछु कि राजनीतिज्ञहरू सबै आफ्नो अभिनयका लागि तयार छन् र सबैले कुलीन भूमण्डलीकरण एजेन्डा प्रयोग गर्दछन्। त्यसकारण यो हामी छक्क पर्दैनौं कि अब हामी एक ओटोम्यान सम्भ्रान्त परिवारको वंशजले युरोपमा अव्यवस्थाको लागि तयारी गर्दैछौं (मार्फत ब्रेक्सिट पराजय) जुनबाट ओटोम्यान साम्राज्य पुन: प्राप्ति हुनेछ। म करीब five वर्षदेखि ओटोम्यान साम्राज्यको यो रिकभरीको पूर्वानुमान गर्दैछु र जहाँसम्म मेरो कुरा हो, तथाकथित सत्य समुदायमा सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको विषय हो।
को मात्र एक सानो सूची विकिपीडिया पृष्ठ अली कमलबाट:
अली कमल बे (ओटोम्यान टर्की: عَلِي كمال‌ بك; 1867 -6नोभेम्बर 1922) एक थियो Ottomanजन्मजात टर्की पत्रकार, अखबार सम्पादक, कवि र उदार हस्ताक्षरका एक राजनीतिज्ञ, जो दत्तो फरीद पाशाको सरकारमा करीव तीन महीनाका लागि गृहमन्त्री थिए, ओटोम्यान साम्राज्यको भव्य भिजेयर। उनको हत्या टर्की स्वतन्त्रता युगको क्रममा भएको थियो।
कमल जेकी कुनेरलपका बुबा हुन् जो स्विजरल्याण्ड, युनाइटेड किंगडम र स्पेनमा टर्कीका राजदूत थिए। यसका साथै उनी दुबै टर्की कूटनीतिज्ञ सेलीम कुनेरलप र ब्रिटिश राजनीतिज्ञ दुवैका बुवा हजुरआमा हुन् स्टेनली जॉनसन। स्टानले जॉनसन मार्फत, अली कमाल को हजुरबुबा हुनुहुन्छ बेलायतको प्रधानमन्त्री बोरिस जॉनसन, साथै जो जोन्सन (ओर्पिंगटनका लागि सांसद), पत्रकार रचेल जॉनसन, र उद्यमी लियो जॉनसन।
यो ओटोम्यान टर्की शैली नाममा, अली कामल दिइएको नाम हो, र परिवारको नाम छैन।
म अझै पनी त्यो अन्तिम टिप्पणीमा जोड दिन चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ कि अभिजात वर्गहरू आफ्नो नाम परिवर्तन गर्न हिचकिचाउँदैनन् र यो एलिस्टिष्ट समूह सामान्य राजनीतिज्ञमा लुकेको छ (उदाहरणका लागि हेर्नुहोस्) यो लेख)। यसैले युनाइटेड किंगडमले जर्मन कुलीन रगत (नेदरल्याण्ड जस्ता) द्वारा शासित छ। घर साक्सोनी-कोबर्ग र गोता (सक्सोनी-कोबर्ग-गोथा) मूलतया एक जर्मन राजवंश हो जसका सदस्यहरूले युरोपका विभिन्न देशहरूमा शासन गरे। राजवंश सक्सोनी-कोबर्ग-साल्फल्ड (Wettin को घर बाट) को डकल घरबाट सुरु भयो, जसले 1826 मा सक्सोनी-कोबर्ग र गोठाको डबल डचि प्राप्त गरे। XNUM-X शताब्दीमा, यस वंशबाट सन्तानहरूलाई अन्य विभिन्न देशहरू दिइयो। एक्सएनयूएमएक्समा, राजा जर्ज पाँचौंले बेलायती शाही परिवारको नाम विन्डसरमा परिवर्तन गरे। प्रचारवादी मिडिया र उनीहरूका धारणा ब्यवस्थापकहरूले यो सुनिश्चित गर्दछ कि हामी द्रुत रूपमा यी सबै सूचनाहरू बिर्सन्छौं, ताकि मानिसहरूले महसुस नगरून् कि प्रजातन्त्र एक प्रहसन हो र पुरानो कुलीन रगतले अझै शासन गर्दछ। तिनीहरू मास्टर लिपिको अभिभावक हुन्।
ब्रेक्सिट डिबेल मास्टर स्क्रिप्टको अंश हो; धार्मिक भविष्यवाणीहरूमा अन्य कुराको बीचमा व्यक्त गरिएको स्क्रिप्ट। 1917 मा बालफोर घोषणा र ओटोम्यान साम्राज्यको टुक्रनाको साथ, इजरायल राज्यको स्थापनाको लागि आधारशिला राखिएको थियो। यो निश्चित रूपमा हासिल गर्न दोस्रो विश्वयुद्धको आवश्यक पर्‍यो, होनोकास्ट debtण जटिलतालाई 1948 मा इजरायल राज्य स्थापनाको इजाजतपत्रको रूपमा। पछि ब्रिटिश साम्राज्यको विच्छेद र ती सबै पुरानो उपनिवेशहरूको क्षयसँगै, अमेरिकामा सैन्य शक्ति परिवर्तन हुन सक्थ्यो र ती सबै पुराना उपनिवेशहरू गोप्य रूपमा ब्रिटिश राजपरिवारको अधीनमा ल्याइयो, जसमा अमेरिकालाई बेलायती राजमुकुटको नाउ राज्य थियो। यो नयाँ महान अमेरिकी साम्राज्य (जसले ब्रिटिश मुकुटलाई करहरू तिर्दछ) अब पतन हुनेछ। मेरो भविष्यवाणी वर्षौं भैसकेको छ कि ओटोम्यान साम्राज्य पुनर्स्थापित हुनेछ। यसको मुख्य लिपिको साथ सबै कुरा छ, जहाँ दुई प्रमुख विश्व धर्महरू बीच यरूशलेमको लागि युद्ध हुनुपर्दछ। यसका लागि सर्वप्रथम यरूशलेमले सियोनवादीहरूको हातमा पर्नु पर्थ्यो त्यसैले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध पनि लिपि अनुसार भयो। तेस्रो विश्व युद्ध अर्को वस्तुको रूपमा एजेन्डामा छ।
यो तेस्रो एजेन्डा वस्तु प्राप्त गर्नका लागि, अराजकता पहिलो यूरोपमा सिर्जना गरिनेछ।
'अर्डो अब चाओ' ल्याटिनमा 'अराजकता बाहिरको अर्डर' को लागि ल्याटिन हो, एक अधिकतम जुन अनन्त कालदेखि लागू गरिएको छ फेरि सत्तालाई केन्द्रिकरण गर्न सक्षम हुन। यो फ्रीमासनरीको हिज्जे हो, जुन ग्रेडेसनमा विभाजित छ। त्यो गोप्य समाज भित्रको उच्च श्रेणी 33 हो। हामी त्यो संख्यालाई महत्त्वपूर्ण घटनाहरू वा घटनाहरूमा देख्छौं जुन उनीहरूमा पाईमा औंला छ। गोप्य समाजहरूको भूमिका प्राय: तुच्छ वा एक षडयन्त्र सिद्धान्तको रूपमा खारेज गरिन्छ, तर यदि हामी शाही घरहरूलाई हेर्छौं भने हामी देख्छौं कि यी 'आदेशहरू'सँग कत्तिको महत्त्व छ। उदाहरणका लागि सुन्तला रंग यसमा प्रमुख छन् Maltese Maltese (एक समाज, गोप्य समाजहरूको पारिवारिक रूखको भाग)।
गोप्य समाजहरू सबै गोप्य रूपमा pharaonic वा प्रकृतिमा बेबिलोनियाहरू हुन्। त्यसो भए पहिलो ज्ञात "सभ्यताहरू" बाट पहिलो प्रमुख पिरामिड-आधारित सरकारहरूमा फर्कन्छ। यो कडा देखिन्छ कि यी गोप्य समाजहरू भित्र त्यहाँ pharaonic Bloodlines को शाखा (अन्तर्निहित) शाखाहरु छन् कि नियोजित विवाह मार्फत आफ्नो आनुवंशिक वंश कायम।
"ओर्डो अब चाओ" स्कटिश राइट फ्रीमासनरीको आदर्श वाक्य हो। अ word्ग्रेजी शब्द 'स्कटिश' ग्रीकबाट आएको छ 'स्कोटी' (स्कोटियोजको स्त्री व्युत्पन्न, गाढा, छायाको, छायाबाट बनेको स्कोटोस, अँध्यारो)। तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि यदि 'स्कोटोस' कालो र छायाँ हो भने, त्यो 'स्कोटी' लाईट प्रतिनिधित्व गर्दछ। यदि हामीले पछि फेला पार्‍यौं कि फ्रिमासनरी लुसिफेरियन हो, तब यो सम्भवतः लुसिफेरियन ज्योति हो। जे भए पनि, भगवानले 'त्यहाँ प्रकाश छ' भने र स्क्रिन खोलिएको थियो र छवि देखा पर्‍यो। यो प्लेस्टेसन खेलको सम्झनामा ताजा गरीन्छ जुन स्विच भएको छ, ताकि छवि पर्दामा लाइट पिक्सेलको रूपमा देखा पर्दछ (हेर्नुहोस्। अनुकरण सिद्धान्त).
भेनस स्कोसियाको एक मन्दिर पुरातन इजिप्टमा खडा थियो। यो भनिन्छ कि स्कटल्याण्ड को देश एक मिश्री फारो रानी बाट स्कोटा नाम लिए। त्यहाँ हामी अर्को सब भन्दा पुरानो सभ्यताको नाम देख्दछौं, अर्थात् इजिप्ट। कुन साम्राज्य पहिलेको बेबिलोन वा इजिप्टको थियो भन्ने कुरा तपाईले गहिरो गरी खन्नु भयो भने पूर्ण रूपमा जित्दैन जस्तो देखिन्छ, तर मुख्य कुरा के भने भनेका गोप्य समाजहरू त्यतिबेलाका फिरऊनहरूसँग जोडिएको देखिन्छ। जे भए पनि, यो स्पष्ट छ कि त्यहाँ यो रक्तरेखा समूह भित्र विवाहित योजना बनाई रहेको देखिन्छ। तर समस्या यो हो कि आजकल सबै चीजहरू नक्कली समाचार वा षड्यन्त्र सिद्धान्तको रूपमा टेबुलबाट बाहिरिएका छन्, ताकि केहीले अझै यसलाई गम्भीर रूपमा लिन। म यहाँ पनि हैरान पार्ने छैन। गुगल्टले आफैलाई यो पत्ता लगाउनको लागि कि एलिटले शताब्दीयौंदेखि रोमान्टिक भावनाहरूको आधारमा नभई योजनाबद्ध अनुभूतिको आधारमा विवाह गर्दैछ।
अल्बर्ट पिइक स्कटिश स्काइट फ्रीमेन्सोरीको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थियो। उहाँ सर्वोच्च शुरुवात हुनुहुन्थ्यो र 33 डिग्री थियो। आधिकारिक इतिहास अनुसार, पिक मेक्सिकन-अमेरिकी युद्धमा एक कप्तान थियो, एक वकील, एक कवि र कुकलुक्सकालको सदस्य पनि। यस आंदोलनको भित्र पिक छिटो सुप्रीम ग्रैंड अध्यायमा बढ्यो। उनले मेसोनिक रिक्तिहरू लेखेका र व्याख्या गरेका थिए र पहिलो दार्शनिक दस्तावेजले प्राचीनको नैतिक र डगमा उत्पादन गरे र फ्रिमेसोरीको स्कटिश राइट स्वीकृत गर्यो, जसले संगठनमा एक प्रभावशाली पुस्तक बनायो। पिकनिक स्मारक एक कन्फिडेन्ट जनरल को सम्मान मा वाशिंगटन डीसी मा एकमात्र मूर्ति मूर्तिकला हो। स्मारक वाशिंगटन, डीसीमा गृहयुद्धको 18 स्मारकहरू मध्ये एक हो, जुन 1978 मा एकसाथ सूचीकृत ऐतिहासिक स्थानहरु को राष्ट्रिय दर्तामा सूचीबद्ध गरियो। त्यसैले पिक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भएको जस्तो देखिन्छ जुन हामी ठूलो अमेरिकी साम्राज्यको पालनामा रहेको छ (अहिले गिरावट) जुन हामीले अब थाहा छौँ।
फ्रीमासनलाई आधिकारिक ईतिहासमा कहिले पनि महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि जिम्मेवार ठानिने छैन। तिनीहरू पृष्ठभूमिमा भएझैं सञ्चालन गर्छन् र सँधै तिनीहरूको आफ्नै महत्त्व (देखिने क्षेत्रमा) खेल्दछ। तपाईं यसलाई अहिलेको समयसँग दाँज्न सक्नुहुन्छ, जहाँ मिडियाले शाही घरहरूलाई औपचारिक संस्थाका रूपमा चित्रित गरेको छ जसको शक्ति वास्तवमा प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले रोकेका छन (वास्तवमा कुनचाहिँ प्रलोभन हो)। त्यसोभए यदि तपाइँ माथि उल्लिखित सज्जन व्यक्तिहरूको औपचारिक पठनका लागि विकिपेडिया खोज्नुहुन्छ भने उनीहरूको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदैन। हामीले हाम्रो वरिपरि देख्ने सबै प्रतीकवाद मा, तथापि, हामी फ्रीमासनरी प्रतीकात्मकता (अधिकतम वर्टस्पेन, न। एक्सएनयूएमएक्स, उदाहरणका लागि, र फॉर्मूला 33 झण्डामा चेसबोर्ड) मा डुबेका छौं। फ्रिमासन्सले देखाउँछन् कि तिनीहरू शासन गर्दैछन्, तर जनता देख्नै नसक्ने छन्।
1871 मा, अल्बर्ट पिइकले आफ्नो इटालियन फ्रीमोसोन समकक्ष गियुपपे मेजिनजीलाई पत्र लेखे। यस पत्रमा उनले तीन विश्व युद्धको भविष्यवाणी गरे। जसको पहिलो पहिलो पुरा तरिकाले लेखिएको छ। तलको पत्रको अनुवाद पढ्नुहोस्:
पहिलो विश्वयुद्धको निर्माण गर्नु पर्छ ताकि इल्लुमिनतीले रूसको क्रारको शक्तिलाई समाप्त पार्छ र देश अस्थिर कम्युनिस्ट बनाउँछ। बेलायत र जर्मन साम्राज्यहरूको बीचमा मतभेद इल्लुमण्ट्याका एजेन्टहरूले ईशारा गरे र यस युद्धको निर्माण गर्न प्रयोग गरे। युद्धको अन्त्यमा, कम्युनिज्म बनाइयो र सरकारहरू र धर्महरूलाई नष्ट गर्न प्रयोग गरिन्छ
दोस्रो विश्वयुद्ध फिस्जिस्ट र राजनैतिक शेरियावादहरू बीचको भिन्नता प्रयोग गरी ईश्वरको रुपमा लिनु पर्छ। यो युद्ध नाजीवादलाई नष्ट गर्न र क्रिस्टाइनमा इजरायल को एक सार्वभौम राज्य स्थापित गर्न पर्याप्त सियोनवाद बलियो बनाउन को लागी कार्यान्वयन गर्नै पर्छ। द्वितीय विश्वयुद्धको समयमा, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्टहरूले ईसाई धर्मलाई तल्लो साताको रूपमा दृढतापूर्वक विकास गर्नैपर्छ, जबसम्म हामी यी भिन्नताहरू अन्तिम सामाजिक विनाशको लागि प्रयोग गर्न सक्दछौं।
तेस्रो विश्व युद्धलाई राजनीतिक शेरियस्ट र इस्लामिक विश्वका अगुवाहरूको बीचमा द्वन्द्वको माध्यमबाट "इलिनोनिटी" को एजेन्टहरूले फ्यान गर्नु पर्छ। युद्ध त्यस्तो तरिकामा उठाइएको हुनुपर्छ जुन इस्लाम (मुस्लिम अरब संसार) र राजनीतिक शताब्दी (इजरायलको राज्य) एक-अर्कालाई एक आपसमा नष्ट पार्दछ। यो द्वन्द्वमा समावेश हुने देशहरू पूर्ण शारीरिक, नैतिक, आध्यात्मिक र आर्थिक थकानमा चल्नेछ। हामी निहिलिस्टहरू र पाहुनाहरूलाई छुटाउछौं र हामी ठूलो सामाजिक आपत्तिलाई प्रहार गर्नेछौं। हामी संसारमा नैतिकता र निषेध जारी गर्नेछौं। हामी यसको डरावनी देखाउनेछौं। तिनीहरू मानिसहरूका बीच जीवितताको कारण हुन्। त्यसपछि मानिसहरू तिनीहरूले नमान्ने क्रांतिकारियों नष्ट र यसरी सभ्यता को destroyers नामेट हुनेछ, अल्पसंख्यक विरुद्ध सबैतिर लड्न हुनेछ। अधिकांश मानिसहरू ईसाईयतमा निराश हुनेछन्। तिनीहरूको दिमागले दिशा वा कम्पास थाहा पाउनेछैन। तिनीहरू एक आदर्शको लागि धेरै लामो हुनेछ। तिनीहरू आफ्नो मनपर्नेलाई केहि कुरामा ध्यान दिन चाहन्छन्। अन्ततः लूसीफरको साँचो लाइट दर्शकहरूलाई देखाइने छ। लुसिफरको अभिव्यक्तिले ईसाई धर्म र हतियारको विनाश पछ्याउनेछ, जुन दुवै एक झटकामा हटाइनेछ।
अक्सर यो भनिन्छ कि यो चिठ्ठी एउटा ठग हो, किनकि "नाजिज्म" भन्ने शव्द 1871 मा कहिले पनि थाहा हुन सक्दैन। त्यस तर्कमा के बेवास्ता गरिन्छ कि स्क्रिप्टका सिर्जनाकर्ताहरू सर्तहरूसँग आउन सक्छन् सामान्य जनताले यी सर्तहरू जान्नु अघि। त्यसोभए यदि तपाइँ बजारमा कम्पनीको रूपमा ब्रान्डको नाम राख्नुहुन्छ भने, मार्केटिंग एजेन्सीले यसलाई सजिलैसँग पत्ता लगाउनेछ जसमा सामान्य मानिसहरूले यसलाई देख्दछन्। खैर, यदि पाईकले आफ्नो साथी माज्नीको (भविष्यसूचक) लिपि वर्णन गरे भने, त्यहाँ त्यहाँ एउटा शब्द हुन सक्छ जुन धेरै बर्ष पछि सर्वसाधारणलाई थाहा थिएन।
यो देखिन्छ कि तेस्रो विश्व युद्धको योजना बनाइएको छ। यो, संयोगवश, पनि प्रमुख विश्व धर्मों को भविष्यवाणी को तस्वीर मा फिट बैठता छ, जो होशियार विरोधाभासी (द्विवादवाद) जस्तो देखिन्छ, तर अन्त-टाइम टाइमलाइन मा एकदम समान यहाँ)। उदाहरणका लागि, दुवै मुसलमान र क्रिश्चियनहरूले ख्रीष्ट विरोधी (इस्लाममा दजल) को आशा गर्छन् जुन आफूलाई मसीहको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ। साथै आशा गर्ने येशूको पुनरुत्थान हो (उदाहरणका लागि हेर्नुहोस् यो व्याख्या शेख इमरान हुसेन बाट)। यहूदीहरूले पनि मसीह र यरूशलेमलाई यी सबै धर्महरूमा एक प्रमुख भूमिका खेल्छन्। इजरायल को राज्य को संस्थापक पनि प्रथम दुई विश्व युद्धहरुमा एक प्रमुख भूमिका निभाईएको छ, यद्यपि यो आधिकारिक इतिहास मा व्यापक रूप देखि मास्क गरिएको छ। पहिलो विश्व युद्धमा, भूमि इस्राएलको राज्यमा आरक्षित गरिएको थियो Balfour बयान। मा हवारा सम्झौता 1933 बाट यहूदीहरूलाई फिलिस्तीनलाई प्यालेस्टाइनको आप्रवासनबाट पहिले नै जर्मनीको साथ रेकर्ड गरिएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धको केही समयपछि इस्राएलको राज्य स्थापना गरिएको थियो। दोस्रो दोस्रो युद्धले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
तसर्थ तेस्रो विश्वयुद्ध, पाइकको पत्रका अनुसार, राजनीतिक जिओनिस्टहरू र इस्लामिक विश्वका नेताहरू बीचको द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुनेछ। यदि हामी धार्मिक भविष्यवाणीहरुमा ध्यान दियौं भने, हामी यरूशलेमलाई प्रमुख भूमिकामा देख्छौं। सुलेमानको मन्दिरको योजनाबद्ध पुनर्निर्माणले उल्लेखित धर्महरूको अन्त-समयका भविष्यवाणीहरू अनुसार यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। ती भविष्यवाणीहरूमा त्यो मन्दिरको पुनर्निर्माणलाई ख्रीष्ट विरोधीको आगमनको चिह्नको रूपमा उल्लेख गरिएको छ, जुन फलस्वरूप त्यहाँ एउटा ठूलो, सबैलाई अँगाल्ने विश्वयुद्ध हुने संकेत हो। उल्लेखनीय कुरा के छ भने अमेरिकी अमेरिकी विदेश सचिव माइक पोम्पीओले मस्जिद मुनिको बिरालोलाई भेट्टाए जुन अहिले यस मन्दिरको भग्नावशेषमा बनेको छ (राजनीतिक सियोनवादी?)। उनले यसै मन्दिरको नमूना हेरे यहाँ)। अल्बर्ट पाइकबाट दुवै पत्र, र अन्त-समय भविष्यवाणीहरू, साथसाथै चिन्ह लगाउँदा ती शास्त्रहरूमा के गरिरहेको छ भनी संकेत गर्दछ, कि हामी ठूलो लिपि साक्षी छौं। एक लिपि जुन 33e मेसन डिग्री को गोप्य समाजका नेताहरु द्वारा ज्ञात छ।
त्यसकारण हामी भन्न सक्दछौं कि फारो रक्तरेखा लिपि बारे सचेत छन् र सामाजिक लिपिहरू पनि यस लिपि अनुरूप छ। एउटा महत्त्वपूर्ण अधिकतम जुन उनीहरूले पालना गर्छन् 'अर्डो अब चाओ' हो। त्यसकारण हामी पूर्ण निश्चयता साथ भन्न सक्छौं कि अधिक शक्ति प्राप्त गर्न उनीहरूले पहिले अराजकता सिर्जना गर्छन्। यसैले म भविष्यवाणी गर्दछु कि ब्रेक्सिट यस स्क्रिप्टसँग मिल्छ र यो शार्बिंगर हो इस्लामिक बल क्षेत्रको लागि अधिक शक्ति माथिको पत्रबाट पाइइक बाट। मा यो लेख मैले पहिले नै वर्णन गरिसकेको छु कि मैले कसरी धेरै वर्षदेखि पूर्वानुमान गर्दै थिए कि ओटोम्यान साम्राज्यको पुन: प्राप्ति हुनेछ र ब्रेक्सिट कसरी युरोपमा अराजकता उत्पन्न गर्न प्रयोग हुनेछ। त्यसोभए बोरिस जोनसन सम्भवतः त्यस्तो फिरऊन ब्लडलाइनको वंशज भन्दा कम केही छैन। म स्थिति लिन्छु कि हामीले राजनीतिमा देखेका सबै मानिसहरू र मिडियाको यस्तो उत्पत्ति हुन्छ र त्यसैले मास्टरको लिपि पूरा गर्न उनीहरूले सधैं कट्टरपन्थी योगदान गर्नेछन्।
स्रोत लिङ्क सूची: wikipedia.org
अर्गानिया एकताबद्ध गर्न इस्लामिक संसारमा बोल्छन्
2023 यस वर्ष जुन यूरोपले तुर्क साम्राज्यमा विलय गर्यो
भेनेजुएला मा एक क्युप प्रयास संग पश्चिमी रोमन साम्राज्य को आखिरी अवरोधहरु
शेख इमरान हुसेन कन्टेनटिनोपल (इस्तांबुल) को लागि युद्ध को भविष्यवाणी गर्दछ
ट्याग: उत्पत्ति, मूल, बोरिस, Brexit, विशेष, जनसन, ओटोम्यान, Ottoman, अमीर, टर्की, टर्की, Zionists
4 सेप्टेम्बर 2019 मा 14: 03
तपाईको सबै कामका लागि धन्यबाद।
मलाई थाहा छैन यदि तपाईंले कहिल्यै शेख इमरान होसेनको बारेमा सुन्नुभएको छ भने। उनले वर्षौंदेखि कन्स्टान्टिनोपलको महत्त्वलाई अन्तको समयमा भनेको छ र अर्थोडक्स क्रिश्चियन र मुस्लिम विश्व कसरी सहयोगी हुनेछ, र कन्स्टान्टिनोपललाई फिर्ता ल्याउँदा अल मसिह विज्ञापन-दज्जल ("झूटा मसीहा, झूटा , धोखा दिने ") इस्लामिक शिक्षण मा फर्कनेछ। यहाँ एक भिडियो वा उहाँ यसको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ।
4 सेप्टेम्बर 2019 मा 14: 05
यदि तपाईंले माथिको लेखमा शेख इमरान होसेनमा खोजी गर्नुभयो भने तपाईले देख्नुहुनेछ कि म उही लेखमा उनीसँग कुरा गर्दै छु।
4 सेप्टेम्बर 2019 मा 15: 13
पूर्ण रूपमा यो उत्कृष्ट विश्लेषणसँग सहमत हुनुहुन्छ! उही समयमा, कार्डहरूको यो राजनीतिक र आर्थिक घर दशकौंसम्म काम भैरहेको छ यसलाई एक निश्चित समयमा बढ्नको लागि। हामी अब सबै संकेतहरू भएको देख्दछौं, उदाहरणका लागि ईसीबी प्रमुखको रूपमा एक दोषी अपराधीको स्थापना। अब हामी मिडियामा पढ्छौं कि ECB को खरीद नीतिले काम गरेको छैन र यसले केवल यूरोलाई बढी कमजोर बनाएको छ। यो ठ्याक्कै गोप्य एजेन्डाको अभिप्राय हो, एकै साथ सबै कुरा डूब्नु ...
राम्रोसँग पग्लियो लेखे:
4 सेप्टेम्बर 2019 मा 15: 17
म नयाँ जन्म पाएको क्रिश्चियन हुँ र मलाई मन पर्छ कि तपाईले मलाई यी सबै कुरा सिकाउनु भएको छ। प्रतीकवादले मलाई झन्डै स्किजो बनाएको छ जसको बारेमा मैले बोलेको छ र फ्रिमास्पेक्ट्रीमा सक्रिय रहेका रेट्रोस्पेक्टमा चिनेका थिए, उनीहरुको चरित्रको स्वभाव र नर्वस TNX लाई3मिटर टाढाबाट टुक्राको रूपमा सुगन्धित गर्न सकिन्छ र प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्दछ उनीहरूको प्राणले "आफैलाई सोच्नुहोस्" जनावरको छापलाई स्वीकार गर्नु अघि!
1 कुरा मात्र मलाई राम्रो लाग्दैन, यदि तपाईं सँधै लुसिफेरियन प्रणाली गलत छ भनेर स indicate्केत गर्नुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं किन यत्ति अनजानमै प्रतिलिपि गर्दै हुनुहुन्छ? "लिपि" त्यसबेलादेखि शैतानको "एजेन्डा योजना" बाहेक केही होइन (जसले आफैं र आफन्तहरूको सम्बन्धमा कहिल्यै पक्रेन तर यसलाई केवल लुसिफर भनिन्छ) परमेश्वर र उसको सृष्टिलाई विफल पार्न, र यदि तपाईंले पाइक जस्ता कसैलाई उद्धृत गर्नुभयो भने, वृद्धि भइरहेको छ, यसको मतलब ऊ पार्थिव एजेन्डाको अनुसार के हुनेवाला छ त्यसलाई "फ्लेक्सिंग" गरिरहेको छ, र शैतानलाई पृथ्वीमा डोमेनपनको साथ एक हुन दिनुहोस्
म तपाईंलाई मेसोपोटामिया कालमा "बाढी आउनु भन्दा पहिले" जान सक्ने सल्लाह दिन्छु, यदि तपाईं डिस्नोफोमा हेर्नुभयो (हामी लाखौं वर्ष पुरानो हो, चन्द्रमा एउटा चट्टान हो जसमा हामी लोलमा अवतरण गर्छौं) तब मलाई पक्का थाहा छ। कि तपाईं नयाँ उचाइमा पुग्न लाग्नुभएको छ, मैले मार्टिनमा तपाईलाई पवित्र आत्माको धेरै कुरा देखेको छु, र मलाई आशा छ कि मेरो टिप्पणीले तपाइँलाई 21e शताब्दीमा (घृणा गरिएको, घृणित र धम्की दिएको) ईसाईले कसरी हेर्छ भन्नेमा अलिक भिन्नता दिनेछ, म हुँ। क्याथोलिक, सुधार गरिएको छैन, शाब्दिक "पुनर्जन्म"
4 सेप्टेम्बर 2019 मा 16: 05
तपाईंको इसाई विश्वासको आधारमा, म तपाईंको प्रतिक्रिया बुझ्दछु, तर म तपाईंलाई (र यो पढ्ने सबैले) यस लेखलाई ध्यानपूर्वक पढ्न अनुरोध गर्दछु, कसरी अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि 'शैतान' र 'लुसिफर' सर्तहरू कसरी राख्न सकिन्छ:
4 सेप्टेम्बर 2019 मा 16: 08
तपाइँले अर्को जवाफ दिनु अघि म तपाइँलाई निलो लिंकहरूको मुनि सबै लेखहरू गम्भीरतापूर्वक र राम्ररी पढ्न अनुरोध गर्दछु। अन्यथा हामीले बेबिलोनी भाषाको भ्रमको सामना गर्न जारी राख्नेछौं।
4 सेप्टेम्बर 2019 मा 19: 52
त्यसोभए !!! पीसीमा, मोबाइल 2x क्र्यास भयो जुन म लेख्न चाहान्छु!
त्यो तर्फ, मैले एक राम्रो पुस्तक लेखेको थिएँ जुन म फेरि उचित सम्मानका साथ सुरू गर्न चाहन्नथें। सही तरिकाले र कुनै कुराको घिनलाग्दो वा घृणा गर्ने भाषणहरू, मैले यो पनि गरिसकेको छु (सायद "तिनीहरूले" केहि हासिल गरेका छन, डिमोटिभेशन?)
म बुझ्छु तपाईं कहाँबाट आउनु भयो किनकि तपाईंलाई तिनीहरूको रहस्यपूर्ण प्रथाहरू पनि थाँहा छन्, तर तपाईंको शत्रुलाई चिन्नुहोस्, र उनीहरूको नक्कल नगर्नुहोस्, "उनीहरू" घृणा गर्छन्, व्याप्त छन्, भगवानले चाहा भन्दा फरक पालो दिन्छन्, तब उल्टो सामान्यतया सत्य नै हुन्छ। , "डेमिर्ज्यल" सन्दर्भहरूको विशाल संख्या हालसालै उल्लेख गरिएको छ कि वास्तवमा स्नीर भगवानलाई बुझिन्छ, मार्वलको एन्डगेम इत्यादि जस्तो कुनै चीज ओभरहाइपड्स (एन्डगेम पनि अहिले सबै कुरामा एक ठूलो विषयवस्तु हो)।
माफ गर्नुहोस् कि अब अधिक सामग्री हराइरहेको छ, मैले यस बर्षमा तपाईंको काम गरेको देखें जब मैले एक अंग्रेजले भनेको कुरा गरे कि "चट्टानको गुम्बज" नट्रे डेमको रूपमा आगो परेको थियो (र अहिले र त्यसपछि हामीले यसको लागि खोजी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। आगामी "घटनाहरू") र अरबी वेबसाइट बाहेक अरू कुनै छैन र तपाईं "गुगल" वा सबै ठाउँहरू मार्फत आउनुभयो! फेरि यो कुरा पढ्न बाध्य भयो कि यो तिमी नै हो जसले युवतीलाई "युवा हेरचाह" मा चित्रित गरेका थिए जहाँ म विश्वास गर्दछु कि MKULTRA अभ्यासहरू मानसिक यातनाको माध्यमबाट आयोजित भइरहेको छ, उनीहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रतीकात्मक लोगोहरू र उनीहरूको भवनहरूमा छन्, अब त्यहाँ धेरै उदाहरणहरू छन्। पहिले क्याथोलिक हुन् र "चर्च" मानिसहरु द्वारा संचालित थियो
(म तपाईंलाई धेरै बर्षदेखि परिचित छु !!!! 111)
भगवान तपाईंलाई आशीर्वाद!
4 सेप्टेम्बर 2019 मा 16: 43
आँखा भएकालाई हेर्नका लागि सम्पूर्ण भौगोलिक स्थिति गिलास जत्तिकै स्पष्ट छ।
के फेड अमेरिकी डलर टपल बनाउन तयारी गर्दै छ?
बैंक अफ इ England्ग्ल्यान्डका निवर्तमान प्रमुख र अन्य केन्द्रीय बैंकिंग आन्तरिकहरूले गरेका असामान्य टिप्पणी र कार्यहरूले विश्व रिजर्व मुद्राको रूपमा अमेरिकी डलरको भूमिकालाई अन्त्य गर्ने काममा निकै कुरूप परिदृश्य रहेको दृढताका साथ सुझाव दिन्छ। प्रक्रियामा, यसमा फेडले जानाजानी नाटकीय आर्थिक उदासीनतालाई शामिल गर्दछ। यदि यो परिदृश्य वास्तविक रूपमा आगामी महिनाहरूमा खटाइएको छ भने, डोनाल्ड ट्रम्प इतिहासको किताबहरूमा दोस्रो हेबर्ट हूवरको रूपमा तल झर्नेछन, र विश्व अर्थव्यवस्था 1930s पछि सबैभन्दा खराब पतनमा धकेलिनेछ। यहाँ विचार गर्न लायक केहि तत्वहरू छन्।
बैंक अफ इ England्ग्ल्यान्ड भाषण
इ special्गल्यान्डकै अत्यन्त विशेष बैंकका प्रमुख, मार्क कार्नेले अगस्ट 23 मा जैक्सन होल वायोमिंगमा केन्द्रीय बैंकरहरू र फाइनान्स एलिटर्सको भर्खरको वार्षिक बैठकमा उल्लेखनीय भाषण दिए। साथी केन्द्रीय बैंकरहरू र वित्तीय अंदरूनीहरूलाई 23 पृष्ठ ठेगाना स्पष्ट रूपमा एक प्रमुख संकेत हो जहाँ विश्व केन्द्रीय बैंकहरू चलाउने पावरहरू द बी भन्ने विश्वले लिने योजना बनाएको छ।
त्यहि समयमा, अवश्य पनि, ब्रेक्सिट, तथाकथित व्यापार युद्ध र इजरायल र इरान बीच बढेको द्वन्द्वको रूपमा विशाल कोहरेको पर्दा खडा भइरहेको छ।
यसको लागि निश्चित रूपमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले देखिने क्षेत्रको शक्ति प्रतिनिधित्व गर्दछन् र राम्रो फुटमेनको रूपमा राम्रो देखिन्छन्, अघिल्लो असाइनमेन्ट सावधानीपूर्वक अदृश्य क्षेत्रबाट गरिएको हेर्नुहोस्। उदाहरण को लागी यी दुई BIS लाकीहरु ...
9 सेप्टेम्बर 2019 मा 15: 33
राम्रो सामन यो एक आश्चर्यको रूपमा आउँदैन कि ड्राघीले नकारात्मक नाफा जहाज छोड्नेछ 31 अक्टुबर (ब्रेक्सिट) को रूपमा।
"मारियो ड्रगीले 31 अक्टोबरमा ECB का सीईओको रूपमा छोडे।"
13 सेप्टेम्बर 2019 मा 12: 23
त्यसैले क्लासजेले पहिले नै आफूलाई कभर गर्न सुरू गरिरहेको छ यहाँ एक सुपर मारियो लाई पठाइएको पत्र पनि छ जसको काम। तर के विचारबाट बाँकी छ कि तिनीहरू प्रत्येक महिना गोप्य रूपमा बासेलमा भेट्छन् ...
« ब्रेक्सिट पछाडि सँधै एक पूर्व योजना बनाइएको छ
NOS र RTL ले आफ्नै डीफफेक प्रोडक्सनहरू मास्क गर्नका लागि डिपफेकलाई पूरा ध्यान दिन्छ »
कुल भ्रमण: 4.167.419